Laascaanood: Garsoorihii Maxkamada Gobalka Sool oo Xalay La Dilay | RBC Radio	Home
Sunday, September 9th, 2012 at 12:03 am	/ 10 Comments Sunday, June 24th, 2012 at 07:53 am Laascaanood: Garsoorihii Maxkamada Gobalka Sool oo Xalay La Dilay
Muqdisho (RBC Radio) Wararka ka imaanaya Degmada Laascoonood ee Gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in halkaasi lagu dilay Garsoore Axmad Dhuun kalax
Wararka ayaa waxay sheegayaan in kooxo ku hubaysan bastoolado ay dileen Axmed Dhuun Kalax oo ahaa Garsoore ka tirsan Maxkamada gobalkaasi Sool.
Waxaa la sheegaya xiliga la dilayay marxuumkaan in uu ku sugnaa goob Maqaaxi oo lagu daawanayay ciyaar xiligaasi socotay oo ka tirsaneed ciyaaraha qaramada qaarada Yurub.
Sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay halkaasi ka baxsadeen kooxaha dilka geestay, iyadoona aanan ilaa iyo iminka aanan la garanaynin.
Saakaay ayaa lagu wadaa Marxuum Axmad Dhuun kalax in lagu aaso degmada Laascoonood oo lasheegay inay tahay degmo siwayn loogu yaqaanay Garsooraha.
Tags: Laascaanood	3 Responses for “Laascaanood: Garsoorihii Maxkamada Gobalka Sool oo Xalay La Dilay”
Laascaanood: Garsoorihii Maxkamada Gobalka Sool oo Xalay La Dilay | Gubta News Network says:	June 24, 2012 at 8:17 am	[...] Read the article: Laascaanood: Garsoorihii Maxkamada Gobalka Sool oo Xalay La Dilay [...]
khaatumo state says:	June 24, 2012 at 12:00 pm	@ to raxanreeb. Degmada laascaanood ee gobolka sool. Maxaad uga jeedaan. Laascanood degmo ma aha ee waa gobol.
Gobolka sool magaalada laascanood sidan ayaa saxa.
qabqabsey says:	June 25, 2012 at 2:12 am	YES
Magaalada Madaxda Gobalka sool ee wadanka Somaliland